गरिब तथा मजदुरका नायक सोनु सुदको घरमा आयकर विभागले किन छापा हाने? - Dainik Online Dainik Online
गरिब तथा मजदुरका नायक सोनु सुदको घरमा आयकर विभागले किन छापा हाने?
प्रकाशित मिति : ३१ भाद्र २०७८, बिहिबार १ : ०१
कोरोना प्रकोपका बेला गरिब तथा मजदुरको नायक बन्न सफल बलिउड अभिनेता सोनु सुदको घर र होटलसहित ६ स्थानमा बुधबार प्रहरीले छापा मारेका छन्। लकडाउनका कारण विभिन्न शहरमा अलपत्र परेका मजुदरलाई खान खुवाउने र गाडीको व्यवस्था गरेकै कारण सोनुको चर्चा विश्वभर ह्वात्तै चुलिएको थियो।
भारतका अधिकाँश मानिसले सोनु सुदलाई भगवानकै संज्ञा दिएका छन्। यसबीचमा उनको कार्यालय, घर तथा होटलहरुमा आयकर विभागले २० घन्टासम्म छापा मारेपछि यो चासोको विषय बनेको छ।
भारतीय संचार माध्यमका अनुसार कर विभागका कर्मचारीहरुले सोनुको घर र अफिसमा उपस्थित परिवारका सदस्य र स्टाफहरुसँग पनि सोधपुछ गरेको थिए। २० घन्टासम्म सोनुको बैंक खाता, आम्दानीकोे श्रोत, खर्च र आर्थिक अवस्थाको बिषयमा छानविन गरिएको बताइएको छ।
अहिले सोनुको घरबाट आवश्यक कागजात लिएर आयकर विभागका कर्मचारी फर्किएका छन्। अगष्ट २७ मा मात्र सोनुलाई दिल्लीको आम आद्मी पार्टीको सरकारले स्कुलका छात्राहरुसँग जोडिएको एक कार्यक्रमको ब्रान्ड एम्बेसडर बनाएका थिए। सामाजिक संजालमा सोनु अरविन्द केजरीवालकोे पार्टीसँग जोडिन लागेकाले पनि छापा मारिएको आशंका गरिएको छ।
किनभने आम आद्मी पार्टी सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टीको कटु आलोचक हो। सोनुको घरमा छापा मारिएपछि दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले उनको समर्थनमा ट्विट समेते गरेका छन्। उनले, समस्यामा परेका नागरिकहरुको सेवामा लागेका सोनुको जित हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। बीबीसीहिन्दीको सहयोगमा